Ubusika ngokukhawuleza buza kunika intwasahlobo. Ilanga liya kuvela, uhlobo luya kufudumala, kwaye uya kuqala ukuvuka, egqoke kwiingubo eziluhlaza. Konke oku kulungile, akunjalo? Kodwa abanye abesifazana abanomdla balindele ukufika kwentwasahlobo. Kwaye ityala lilanga, kwaye ukuba uthetha ngokuchanekileyo, imitha ye-ultraviolet. Ziba negalelo ekubonakaleni kweenkukhu ebusweni. Ngokuqhelekileyo bahlobisa ubuso babasetyhini, benze bahle. I-Freckles ibonakala kulabo bantu abanamahlunu anengcola kwi-melanin. Ukuphendula okunjalo kubantu abanobuchopho obushushu bomsindo kunceda ukuphepha ukushona kwelanga. Kodwa kwenzeka ukuba ii-freckles zikulinganisa, ke le nqaku ikukuthi. Indlela yokulahla i-freckles: ngokukhawuleza, ngeendlela zasekhaya, kufunda kule ncwadi.
Phuma ngokukhawuleza kwiintlobo ezingenakusebenza. Kodwa ukukhusela ukubonakala kweenkonkxa kunokuba lula. Zidinga nje indawo engummangaliso. Yaye ukuba uthethi kulula, ke yonke intsasa ngaphambi kokuhlamba, sebenzisa iimaski ze yogurt okanye i-kefir imizuzu emihlanu, okanye uhlambe ngesisombululo: 1 ithispoon yeviniga kwiglasi yamanzi. Kukho indlela eqinisekisiweyo yokukhusela i-freckles, usule ubuso bakho ngejisi ye-anyanisi okanye i-lemon.
Faka isicelo se-sunscreen ebusweni bakho ngezinga elikhuselekileyo lokukhusela, kwaye wenze isicelo sokwenza iifom. Kodwa ukuba naphezu kwayo yonke into ayishiyi ubuso bakho, sebenzisa ama-creams ahlukeneyo, i-bleaches, iimaski ezahlukileyo, ezona zininzi kwiithala zeentengiso. Nguwe kuphela omele ukhethe ukukhetha inkampani yezonyusa kunye nokubeka imali ethile. Kodwa unako kwaye ungayisebenzisi imali ukufumana umphumo oyifunayo. Sebenzisa iindlela zokupheka ongazenza ekhaya. Abayi kunika umphumo ngokukhawuleza, kodwa abayi kulimaza ulusu kwaye abakunobungozi.
Zonke izixhobo zisebenziswa ekuhlambuleni isikhumba. Faka isicelo semaski eziliqela ngeveki, uhlambe 2 okanye kathathu ngosuku. Ukuba ulusu lube lukhuni, ngoko kufuneka isilungiso sisetyenziswe kangangoko. Ukuba ukusetyenziswa kweemaski kunobungozi, kufuneka kubekwe.
Indlela yokurhoxisa i-freckles ebusweni ngokukhawuleza
Eyokuqala kwoluhlu lwezonyango zomntu ezinceda ukulahla i-freckles yikhukhamba .
Ikhukhamba elitsha, kunye ne-peel, siza kusihlamba kwi-grater kwaye sisebenzise le maski ebusweni. Ngokwenza njalo, sisebenzisa i-napkin ye-gaukin. Emva kwemizuzu engama-20, susa imaski. Emva kwayo, ubuso abuhlambi. Abanye abantu bafaka iibhola zeseksi ebusweni babo. Le maski ilula ukuyilungisa, kodwa ingonwabi. Ungasula ubuso bakho ngejisi lekhukhamba, okanye usike ucezu.
I-lemon iyathandwa phakathi kwabathandi bezonyango zemvelo. Isinki esisebenzayo esinceda ukulahla i-freckles, iqukethe isipuni se-1 sejoni kunye neqanda elimhlophe, lixutywe, lithululelwe kwaye lisetyenziswe ebusweni. Unokusihlamba ubuso bakho ngejisi lemon. Ngelo xesha liphepha indawo ejikeleze amehlo. Siza kubeka i-20 okanye imizuzu engama-30, size sihlambe ngamanzi.
Ngokuqhelekileyo isetyenziselwa ukulahla i-freckles ebusweni.
- Ukusika ngokugqithisileyo i-parsley. Emva koko siza kuthululela iglasi yamanzi abilayo imizuzu engama-30, yidle. I-lotion efunyenweyo imihla ngemihla isula ubuso 2 okanye amaxesha amathathu.
- Sika iparsley entsha kwaye uyibeke ebusweni imizuzu eyi-15. Ebusika, endaweni yokuhluma, sisebenzisa ingcambu ye-parsley, esiza kuyisebenzisa kwi-grater encinci. Kwi-parsley eqoshiwe, faka ii-2 teaspoon ze-ukhilimu omuncu kunye namaconsi ambalwa ejusi le-orange. I-gruel ephumela kuyo iya kusetyenziswa ebusweni kwaye emva kwemizuzu eyi-15 iya kuhlamba ngamanzi.
Thatha inxalenye efanayo neyom juice, ubusi kunye ne-parsley eqoshiwe, gxiba ubuso bakho. Emva kwemizuzu eyi-15, uhlambe kakuhle.
Thela iipuni ezimbini ze-parsley ecoliweyo kwiglasi yamanzi abilayo kwaye ushiye i-2 okanye i-3 iiyure. Gxininisa kwaye uhlambulule kwifriji. Kwithuba elingaphezulu kweveki, oku kungenakukwazi ukugcinwa. Ukusuka kulo mngxobhozo siya kulungisa i-cube ye-ice, apho siyihlahlela ubuso.
Izindlela zaseKhaya zinokukhawuleza ukulahla ii-freckles
- Thatha i-50 ml yobisi olumuncu, faka i-1punipoon ye-oat flakes kunye ne-½ ithispoon ekhuniweyo.
Sifaka lo mxube kumgca we-gauze, silungise kunye neqhekeza le-gauze uze uyibeke ebusweni bakho. Emva kwemizuzu engama-20, i-mask iya kubetha. Qaphela, ungavumeli ijusi ingene emehlweni akho, kuba i-horseradish ishushu kakhulu.
- Hlanganisa i powderard, ioli ye-almond kunye nejisi lemon enenani le-6: 1: 1. Olu bunzima lususwe kanye ngosuku.
- Hlanganisa amanzi amaminerali kunye nejisi lemon enomyinge we-2: 1 kwaye lo mbhalo usula ubuso malunga nemizuzu emithathu.
- Rustolchem ​​ngaphambi kokubonakala kwejusi 1 isipuni se-yarrow iintyatyambo, kongeza kuyo i-1 cupoyi whey, i-1 teaspoon pasi cloves, i-juice yamagilebhisi. Shiya ebusweni imizuzu eyi-15 kunye ne-smoem. Emva koko fake ukhilimu ebusweni bakho.
- Thela ezimbini iipunipoons ze-dandelions eziqwengqwayo 1 okanye 2 iziglasi zamanzi kwaye upheke, ukuba izityalo ezintsha zemizuzu emi-5, okanye upheke imizuzu engama-15, ukuba izinto ezinomileyo zome. Emva koko, upholile kwaye usule i-decoction okanye i-cubes eqhelekileyo emfuleni.
Mask for white whitening freckles
Sicima ama-berries we-strawberries kunye ne-currant, sisebenzisa ukusikwa kwe-face. I-Kashitsu yazo iya kusetyenziswa imizuzu engama-20 ukuze ibhekane nayo, ngoko sihlamba ubuso ngobumanzi obufudumele. Ukuba ulusu lunamafutha, sigubungela ubuso nge-serum, eyahlukana kwi-kefir ukuba ihlala iintsuku eziliqela.
½ indebe yeelmond yamangelwana iya kugcwaliswa ngamanzi abilayo imizuzu embalwa ukwenzela ukuba kulula ukukhupha isikhumba. Amanuclei ahlambulukileyo ahanjisiwe, engeza isipuni 1 samanzi abilisiwe kunye ne-juice ½ lemon. Faka isicelo se-mask kwisigamu seyure, 2 okanye kathathu ngosuku. Inkqubo yokonyango iinyanga ezine okanye 5.
Kwi-small grater siza kugubha amazambane ahlaza. Yongeza i-almond bran, amaconsi ambalwa eoli yemifino, i-1 isipuni sebisi. Umaski ngobuninzi kufuneka ufanise ukhilimu omuncu. Emva kokusebenzisa le maski, siya kusebenzisa ukhilimu.
Ekulweni nama-freckles kukunceda ukunqumla, esi sityalo sinokusetyenziswa ngokucophelela. Ijusi ye-Horseradish ixutywe nekhilimu omuncu kwisilinganiselo se-1: 1, ngaphandle kwendawo ejikeleze amehlo. Emva kwemizuzu emi-5, susa imaski, uhlambe ubuso ngobomi.
Kwizilwanyana zamandulo zisebenzisa izixhobo ezifana ne-hydrogen peroxide kunye neviniga, kodwa ezi mali zizinto ezinobundlobongela, azikwazi ukusetyenziswa kwesikhumba esincinane.
Siyazi indlela onokukrazula ngokukhawuleza ii-freckle ngeendlela zasekhaya. Ewe, zonke ezi zixhobo aziyi kukukhulula ngokukhawuleza kwiintlobo. Kufuneka ube nomonde. Kodwa okubaluleke kakhulu, ngaphambi kokuba uqale ukulwa neenkukhu ekhaya, uye kwisibuko uze ucinge malunga nokuba ufanele uyenze. Mhlawumbi i-freckles yenza ubuso bakho bukhangele, buvuya kwaye bubumnandi. Ngaphambi kokuba wenze imaski, kufuneka uthabathe inani elincinci lobu bunzima kwaye ulivavise kwi-bbow bow. Nceda uqaphele ngeemaski zesardadi, i-horseradish. Siyathemba ukuba ezi zokupheka ziyakusindisa kwii-freckles, kwaye uncede uhlale unesimo esihle.
Ukusikwa kwe-facial eyesonsonic
Indlela yokuhlakulela ilizwi lokucula?
Izindlovu ezintathu ezihamba nomntwana
Izizathu zokubahlukanisa abantu
Ubufazi, yintoni na? Kuthetha ukuthini ukuba ngumfazi?
Ukubuyiswa emva kokubeleka, ukuphucula impilo
I-cottage cheese casserole kunye nama-apricot omisiwe
Isimo sengqondo esifana nezilwanyana ezifuywayo